Wallace Stroby’s Westlake Obituary « The Violent World of Parker
« Mark Finn at The Cimmerian: Rest in Peace, Donald Westlake
Made in U.S.A.: Godard’s Missing Link »
While readingadraft of my first novel, THE BARBED-WIRE KISS, [agent Knox] Burger called me out of the blue to criticize my tendency to write overly terse, inamanner he found inappropriate for the story. “You’re trying to write like Richard Stark,” he told me. “Don’t!”
But who could, even if they wanted to? Westlake and Stark were one ofakind. We’ll never see their like again.
Posted by Trent on January 14th, 2009 | Tags: Donald Westlake, Richard Stark, Wallace Stroby | Category: Obituaries
မသက ၀ရ ဘ လ မ feedback လ လ cilmpaon လ လ က န တ ရ က န မန . တ အတ က က တင တ င ပန ပ ရ စ …. ပ စရ ရ တ က တ ဆက ပ ပ ရ စ .က စည သ ရ အက အ က င ပန လည ရ င ပတ က န မန .အတ က က ဇ ပ ပ က န တ က NUS ပ လည သ ခ ပ တယ နရ က င ယ ဥ ရ ရင တ Poly က ပ ကပ ပ က င ပ တယ က န တ တ .လ public transportation သ တ အတ က MRT န . န တ အတ က တ တ လ အဆင ပ ပ တယ NUS က တ တက စ န .အသ /အ ပန လ ပ လ က ရပ တယ ခ န .လက မ တ က တ ခ န ပ တ က ခ ပ ရ င ရင လည ဖစ ပ တယ NUS အဖ .လည ခ ရ င ပ ရပ တယ အမ န အတ င ပ ရရင ပထမအဖ .က ဥ က ၀င ဥ ဘ န တ .က က န တ မသ ပ ဒ ပမ သ န ထ င တ အခ တကယ က က င ပ တယ ဟ ပ တ ဆရ တ ရ မန မ န င င အ ပ သ တ .ထ တ စတန က လ စ မ တ အ ပင သ တ .ရ ဗဟ သ တ အ တ .အ က က လည သတ ထ မ ပ တယ က န တ ဟ ဆရ ဥ ခ စ စ ၀င ရ ပရ တ သတ တစ ယ က ပ သ .ရ ဤခရ န သလ န . အ မန .အ မအ က င စ အ ပ တ .က က က စ သက ပ တယ ဒ ပမ ဆရ ရ ဟ ပ မ က အစ အစဥ မရ န . ဖစ နပ တယ အသက အရ ယ က မ င လ လ .လ ဖစ န င ပ တယ က န တ င ယ ဥ မ တ က န မည က အဆ တ တစ ယ က ဟ စ ရ ထ တ တ အခ အ ခ က န ထ င လ . က င ပ တယ ရ က ဒင စက အ က င အစ န . အထပ ထပ အခ ခ ဆ ထ တ က ဒ ပမ အ ဒ အဆ တ ကပ live ပ ဆ တ အခ သ စဥ တ မည မည ဖစ န သလ ပ န က တစ ခ အ တ .အ က က က ယ ခ န ပတ န . မထ င တ ပ န ပ ပ က န တ NUS ပ ရ က တ အခ နည နည န က က ပ တယ အ ဒ န .စလ အမ သမ လ ခ ရ က က န တ လက မ တ ပ ပ ခ န ပ တ က ပတ အခ သ မက က န တ ခ မ တစ ခ သ ထ င န ပ ဖစ တ န က က ခ မ ထ င လ . ပ ပ တယ အ ဒ န . က န တ က ဘ က င င ခ မ င ထ င ခ င မရ တ လ လ . ပန ပ တ အခ သ မက အ ဒ ဆ ရင ထ င နတ သ က ဖယ ပ ဖ . သ မက ပ ပ မယ တ က န တ လည က ယ မန မ အခ င ခ င ဆ ပ န က ကခ မ ၀င ထ င ပ တယ နဂ ကတည က စ စ ပန ဖ .ထ င စ န .ခ က ရ ထ တ ပ Poly ပ မ လည ထ င စ န . ခ က ရ ပ သ တ အခ သ မ က ၀င ထ င ထ ပ တယ က န တ ခ က EE 37 ပ တ ၀န က တ သ က ခင ဗ ခ မ အ ခ လ ထ င န ပ န က ခ မ ထ င ဆ ပ ပ ပန ပ တယ အ ဒ န . NUS cultural hall မ လ သ ခ ပ န က ခ မ ထ င ရပ တယ က ယ က ဟ ပ ပ က န ထ င နစဥ မ ပ က ယ လ န က က တ သ တ က ၀င လ ပ က ယ ခ န မ ရစ သ သ လ ပ နရင က ယ ကပ ခ ကထ ပ ရမလ ဖစ နပ တယ က ယ က သ မ ခ မ ထ င မ န ပ က …က ယ က န က က လ . ဘယ သ .မ မလ ဖ ထင ပ လ ထ င တ လည ဖစ န င ပ တယ န က တစ ဖ .က အ ဒ ခ မ လ ထ င တ မ တစ ဖ .လ ဖယ ပ ပ တယ အ ဒ အသစ ရ က လ တ အဖ .ကလည က န တ ခ မ လ မ ပ ဆက ထ င န တ လည က န တ သ မထ င ခ င တ ပ (Google Account န . sign in လ ပ လ .မရ လ .အမည မသ န . ရ လ က ရ ခင ဖစ ပ တယ )ခင တ ZZZ